Ikwesiri ịmara banyere ọkụkọ Lorcaserin HCL | AASraw suppliers
/blog/Lorcaserin HCL/20 ihe kachasị mkpa Ị ga-achọ ịma gbasara ọkụkọ Lorcaserin HCL
Ihe na 04 / 09 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Lorcaserin HCL. O nwere 1 Comment.
Ihe niile banyere Lorcaserin HCL ntụ ntụ
1.Wa bụ Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ?
2.Lorcaserin HCL ntụ ntụ (Belviq)
3.Ònye nwere ike iji nkwonkwo nkwonkwo nke Lorcaserin HCL (Belviq)?
4.Ònye ekwesịghị ịnara ntụ ntụ Lorcaserin HCL?
5.Olee ka Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ si arụ ọrụ?
6.Olee ka eji eji Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ?
7.Otu esi mee Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ maka ọnwụ ọnwụ?
8.Lorcaserin HCL ntụ ntụ uru
9.Howu ka mmanu Lorcaserin HCL dị?
10.Lorcaserin HCL ntụ ntụ
11. Ntuziaka nke Lorcaserin HCL ntụ ntụ
12.Ilee Lorcaserin HCL ntụ ntụ dị mma?
13.Lorcaserin HCL ntụ ntụ Akpa na Mmetụta
14. Nkọcha ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL (Belviq) 'High' na Abuse
15. Ime na Lorcaserin HCL ntụ ntụ ntụ (Belviq)
16.Lorcaserin HCL ntụ ntụ Mmekọrịta
17.Lorcaserin HCL ntụ ntụ nri mmekọrịta
18. Ngwọrọgwu Lorcaserin HCL
19.Gịnị mere o ji dị ogologo oge iji nweta ọgwụ ọjọọ ọhụụ ọhụrụ?
20. Zụrụ Lorcaserin HCL ntụ ntụ
I.Raw Lorcaserin HCL ntụ ntụ bụ isi Characters:
Molekụla Formula: C11H15Cl2N
Ọbara arọ: 232.1525
1.What bụ Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ?
Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ na-emetụta ihe ndị na-emepụta ọgwụ na ụbụrụ na-achịkwa agụụ. Ọkụ Lorcaserin hydrochloride na-arụ ọrụ site n'inyere gị aka inwe obere nri. A na-eji ntụ ntụ nke Lorcaserin hydrochloride na nri na mmega ahụ na-emeso oke ibu. A na-ejikarị na-eme ka a na-eme ka a na-ejikarị mmiri ozuzo na-arụ ọrụ na ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọbara mgbali elu. Ọkụ Lorcaserin hydrochloride agaghị agwọ ọrịa ọ bụla (dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ọbara mgbali elu). Nọgidenụ na-aṅụ ọgwụ ọ bụla dọkịta gị nyere iwu ka ị na-emeso ọnọdụ ndị a. A pụkwara iji ya mee ihe maka nzube ndị edepụtara na ntuziaka ọgwụ a.
2. Lorcaserin HCL ntụ ntụ (Belviq)
Akwukwo Lorcaserin HCL, aha aha: Belviq, isi ihe: Lorcaserin HCL, nke a na-eji ya na nri na bodybuilding iji na-emeso oke ibu, maka oke ocha. A na-eme ka a na-agwọta oke ibu na cholesterol dị elu, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ ụdị 2 diabetes.drug lorcaserin nọ na otu ọgwụ ndị a maara dịka ndị agonists na-anabata ọrịa serotonin. ugbo ogwu na-arụ ọrụ site na ọgwụ ndị a na-eche na ụbụrụ nke na-emetụta agụụ.
3. Onye nwere ike iwere Lorcaserin HCL ntụ ntụ ( Belviq)?
FDA kwadoro ọgwụ maka ndị oke obosara (nke nwere nchịkọta anụ ahụ, ma ọ bụ BMI, nke 30 ma ọ bụ karịa) ma ọ bụ ndị buru oke ibu (nke nwere BMI nke 27 ma ọ bụ n'elu) ma nwekwara ọ dịkarịa ala otu ọnọdụ ahụ ike metụtara ahụike dị ka ụdị ọrịa shuga 2, ọbara mgbali elu ma ọ bụ cholesterol dị elu.
4. Onye na-ekwesịghị Lorcaserin HCL ntụ ntụ?
• A na-egbu ntụ ntụ nke lipine Lancenin HCL na mmiri ara nne, ya mere a na-atụ aro ya ịkwụsị iji ya ma ọ bụ amalite usoro ọgwụ mgbe ọ nọọsụ.
• Ndị ọrịa nwere ọrịa serotonin ma ọ bụ ọrịa na-arịa ọrịa neuroleptic.
• Ọrịa nwere nkwarụ afọ (s).
• Ndị ọrịa na-arịa oké ịda mbà n'obi.
• Ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga ma ọ bụ ndị na-ahụ ọbara shuga na-adịghị ala ala n'ihi ọgwụ ndị na-arịa ọrịa shuga.
• Ndị ọrịa na-ahụ priapism, mgbatị dị elu na mkpịsị na-adịgide karịa oge 4, aghaghị ịkwụsị iji ntụ ntụ Lorcaserin HCL mee ihe.
5. Kedu ka Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ na-arụ ọrụ?
(1) Nhazi nke ihe - Lorcaserin hydrochloride powder
Akwukwo nke Lorcaserin hydrochloride na-arụ ọrụ site na ịchịkwa agụụ - kpọmkwem site na ịgbalite ụbụrụ ụbụrụ maka serotonin, ihe ntanetị nke na-eweta mmetụta nke satiety na afọ ojuju. Ihe oriri na-edozi nri nke satty center, nke dị na etiti ventromedial nke hypothalamus na ebe ndị agụụ na-anọ na hypothalamus n'akụkụ ọnụ. Ntinye ntinye sitere na ụlọ elu dị elu na tract gastrointestinal na-agbakọta na arcuate nucleus, ebe ụdị abụọ nke na-achịkwa nri oriri dị. Mbụ, ihe oriri na-akpali agụụ mmekọahụ na-emepụta protein na protein neuropeptide Yuta; na nke abuo, otu oriri na-eri nri nke nwere cocaine na amphetamine na-edozi transcript (CART) na pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. POMC nwere ihe nzaba 5-HT 2C, nke a na - eme ka a na - ebute hormone alpha-melanocyte (alfa-MSH) ma ọ bụrụ na a na - arụ ọrụ na - emepụta ihe ndị ọzọ na - emepụta ihe dị na hypothalamus.Utu nwere ike ịchọta ihe ndị na - anabata 4 (MC4R) nke na - na-eme ihe dịka onye agonist 5-HT 2C ahịrị na POMC neurons, nke nke a na-eme ka a hapụ MSH alfa. Ihe ọzọ MSH MSH na-eme na MC4R na oghere paraventricular na hypothalamus, na-eme ka ọnụlata agụụ. Na nchịkwa supratherapeutic, lorcaserin na-emekwa na 5-HT 2B na ndị natara 5-HT 2A.
(2) Lorcaserin hydrochloride • Nkà ọgwụ na-eme:
A na-etinye ngwa ngwa na mpaghara na-emepụta ọgwụ na-eme ka Lorcaterin hydrochloride banye ngwa ngwa. A na-enweta ịta ahụhụ plasma kacha elu na 1.5-2 h, na ọkara ndụ nke 11h. A na-ekesa ya ọbụna n'ụdị mmiri ọgwụ na ụbụrụ nke etiti. Lorcaserin hydrochloride bụ 70% protein protein plasma ma jikọta na imeju, ya na nnukwu metabolite bụ hydrochloride sulfamate, na excretion bụ tumadi site na mmamịrị (92%) na nwatakịrị obere site na ihu.
(3) Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ na-arụ ọrụ na ibu
Mmiri hydrochloride na-arụ ọrụ site n'ịchịkwa agụụ - kpọmkwem site na ịgbalite ụbụrụ ụbụrụ maka serotonin, ihe ntanetị nke na-eweta mmetụta nke satiety na afọ ojuju. Serotonin na-emetụta ọnọdụ; ọtụtụ ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa antidepressant na-arụ ọrụ site na igbochi reuptake nke serotonin ma na-echekwa ụbụrụ na-ehicha na chemical. Ndị nchọpụta na Arena na-ekwu na ọgwụ ha na-eme iji chọpụta nanị ndị na-anabata serotonin nke na-emetụta agụụ.
6. Kedu ka a ga-esi mee ihe Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ?
Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ na-abịa dị ka mbadamba nkume iji were n'ọnụ. A na-ejikarị ya ma ọ bụ na-enweghị nri ugboro abụọ n'ụbọchị. Were okpukpuchi hydrochloride na otu oge ahụ kwa ụbọchị. Soro ntuziaka ndị dị na akara aha gị na nlezianya, jụọ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ike ịkọwa akụkụ ọ bụla ị na-aghọtaghị. Were okpukpuchi hydrochloride kpọmkwem dị ka a gwara gị. Ejila ihe ma ọ bụ na-erughị ya ma ọ bụ buru ya karịa oge dọkịta gị nyere iwu.
O nwere ike ịbụ na a na-akpụzi na Lorcaserin hydrochloride. Ejila ọgwụ buru ibu, buru ya ugboro ugboro, ma ọ bụ were ya ruo ogologo oge karịa dọkịta gị nyere iwu .Ọ bụrụ na ị gaghị efunahụ ụfọdụ arọ n'oge 12 mbụ nke ọgwụgwọ gị, o yighị na ị ga-erite uru site na ị na-ewere lochcaserin hydrochloride. Dika dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ka ị kwụsịrị ịbịakarị hydrochloride ma ọ bụrụ na ị gaghị ezughị ibu n'oge izu 12 nke mbụ gị.
Lorcaserin hydrochloride ga-enyere gị aka ịchịkwa ịdị arọ gị nanị ma ọ bụrụ na ị nọgide na-ewere ya. Akwụsịla ịkwa ụbụrụ hydrochloride n'ekwughị dọkịta gị. Dọrọ onye na-ere ọgwụ gị ma ọ bụ dọkịta ka o nye gị akwụkwọ maka onye ahụ.
7. Otu esi eme Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ maka ọnwụ?
(1) Tupu ewere Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ
Ekwesighi iwere onodu hydrochloride ma oburu na o bu ihe ojoo. Ejila hydrochloride dị elu ma ọ bụrụ na ị dị ime. Ọfụma ọnwụ n'oge ime ime nwere ike imerụ nwatakịrị a na-amụbeghị amụ, ọ bụrụgodị na ibu oke. Gwa onye dọkịta gị ozugbo ma ị ga-atụrụ ime n'oge ọgwụgwọ.
Iji jide n'aka na lorcaserin hydrochloride dị mma maka gị, gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na i nwere:
• ọrịa shuga;
• nkụda obi congestive;
• nsogbu mgbawa obi;
• ọnọdụ obi dị ka "AV" (2nd or 3rd degree);
• leukemia ma ọ bụ myeloma;
• akụrụ ma ọ bụ ọrịa imeju; ma ọ bụ
• nrụrụ anụ ahụ nke ederede (dị ka ọrịa Peyronie).
A maghị ma ntụ ntụ Lorcaserin hydrochloride na-abanye n'ime mmiri ara ara ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike imerụ nwatakịrị nọọsụ. Ekwesighi ka ị na-aṅụ ara na-eji ọgwụ a eme ihe. Anaghị anabata onye na-eto eto karịa 18 afọ.
(2) Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ ojiji
Were Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ dịka edepụtara. Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ na-abata na mbadamba ụrọ ma were ya ugboro abụọ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị gaghị efunahụ ụfọdụ ihe dị arọ n'oge nke mbụ 12 izu gị ọgwụgwọ, ọ gaghị abụ na ị ga-erite uru site na-ewere lorcaserin hydrochloride. A maghị ma ọ bụrụ na lorcaserin hydrochloride dị mma ma dị irè na ụmụaka n'okpuru 18 afọ. Ọ bụrụ na ị na-atụfu ọgwụ, wepụ ụbụrụ a na-atụghị anya ozugbo ị chetara. Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka ọkpụkpụ ọzọ, mee ka ụbụrụ na-ezighị ezi kwụsị ma were ọgwụ ọzọ gị n'oge oge. Ejila ọgwụ abụọ nke lorcaserin hydrochloride n'otu oge ahụ.
(3) Azu nke Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ
Soro ntuziaka niile na akara aha gị. Ejila ọgwụ a buru ibu ma ọ bụ dị ntakịrị ma ọ bụ karịa ogologo oge ka akwadoro ya. A na - ewerekarị mbadamba ụrọ oge 2 ugboro kwa ụbọchị. A na-ewepụta mbadamba ụlọnga a na-ewepụ otu ugboro kwa ụbọchị. Soro ntuziaka nke dọkịta gị. Echela, chegharịa, ma ọ bụ mebie mpempe akwụkwọ agbatị. Kpoo ya dum.
Ị nwere ike iwepụta hydrochloride na nri ma ọ bụ na-enweghị nri. Ị ga-atụfu ma ọ dịkarịa ala 5% nke mbido mbido gị n'oge nke mbụ 12 izu nke na-ewere lochcaserin hydrochloride ma rie obere calorie nri. Kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị ghara idafu 5% ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-ewere mmiri hydrochloride maka izu 12. Lorcaserin hydrochloride bụ naanị akụkụ nke usoro ọgwụgwọ zuru oke nke na-agụnye nri, mmega ahụ, ịchịkwa ibu, ma eleghị anya ịnwale shuga shuga gị. Soro ihe oriri gị, ọgwụ, na mmega ahụ na-emechi anya.
Leba anya na onu ogwu a na eji obo ohuru obula. Lorcaserin hydrochloride bụ ọgwụ ọjọọ na ị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na - eji ọgwụ gị eme ihe n'ụzọ na - ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na - enweghị ọgwụ edere .Ọ gaghị esoro onye ọzọ na - ekerịta hydrochloride. Debe ọgwụ ahụ na ebe ndị ọzọ na-apụghị ịbanye na ya.
(4) Lorcaserin hydrochloride powder Ndozi
Mgbaàmà nke nkwụsịtụ gụnyere ụdị dị njọ nke ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ahụ e depụtara n'elu .Ọ bụrụ na ị na-eche na nkwụsịtụ, kpọtụrụ ụlọ ma ọ bụ ụlọ mberede ozugbo. Ị nwere ike ịbanye na etiti njikwa na nsi (800) 222-1222.
(5) Ụgha nke Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụ Belviq, buru ya ngwa ngwa ị na-echeta. Ma, ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka ọgwụgwọ ọzọ gị, mee ka ụbụrụ na-ezighi ezi kwụsị ma nọgide na nhazi usoro ọgwụgwọ gị. Ejila okpukpu abụọ mee ihe iji mechie maka onye ahụ furu efu.
(6) Gini ka m kwesiri izere mgbe m na-ekwu okwu hydrochloride?
Usoro ọgwụ a nwere ike imebi echiche gị ma ọ bụ mmeghachi omume gị. Kpachara anya ma ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ mee ihe ọ bụla chọrọ ka ị nọrọ na nche. Zere ịnara ụkwara na oyi ma ọ bụ ọgwụ na-ekesa ahụ mgbe ị na-eji ụbụrụ hydrochloride.
8. Lorcaserin HCL ntụ ntụ uru
Ibu ibu na-eto eto na oria ojoo na mba dika USA, UK na India.1-3 WHO na oru nke 2015, ihe gbasara 700 nde ndi okenye ga-enwe nsogbu obula .4 Ibu ibu bu isi nsogbu ahuike nke mmadu, karia nkwarita ahu ọ na-eme ka ọtụtụ ọrịa ndị na-adịghị ala ala dịkwuo ogologo oge dị ka ọbara mgbali elu, ụbụrụ ụra, ọrịa shuga, ọrịa akwara obi na ọrịa cancer. N'ụzọ doro anya, oké ibu bụ ihe dị egwu, na-etinye nnukwu ibu akụ na ụba na usoro nlekọta ahụ ike.
Ibu bụ nke abụọ kasị igbochi-akpata ọnwụ, nke ọ bụ nanị na-emepụta sịga use.6 Evidence na-egosi na ibu Mbelata n'ụzọ lowers ihe ize ndụ nke yiri comorbidities ma na-akpali ha ọgwụgwọ management.7, 8 Ọ bụ ezie na ọkachamara n'ibu ịwa ahụ pụta dị ka ndị kasị clinically irè atụmatụ maka usen arọ ahụ maka ndị na-atụ oké ibu (ahu uka index (Ọtụtụ BMI) ≥40) ma ọ bụ n'ihi na ndị na-apụghị jisiri ma, 9 na ọ bụ nnọọ invasive usoro na ịrịba risks.10, 11 Mgbe a na mkpughe, akparamàgwà ọgwụ, si ebi ndụ mgbanwe na ọgwụcotherapy na-abụ ihe bụ isi nke ọgwụgwọ. Ihe ngwọta kachasị mma maka ọha na eze n'ozuzu ya ga - abụ "ọgwụ nkwụsị ọnwụ". Enwere ọtụtụ ụdị ọgwụ ọjọọ, dịka sibutramine, listlist, leilistat ... wdg. Ọkpụkọ Lorcaserin HCL bụ otu n'ime ọgwụ ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
-Lorcaserin HCL ntụ ntụ na-ejikọta ọnụ na nri na mmega ahụ na-emeso oke ibu.
-Lorcaserin HCL ntụ ntụ na-eme mgbe ụfọdụ iji na-emeso oké ibu nke nwere ike ibute ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
-Lorcaserin HCL ntụ ntụ agaghị agwọ ọrịa ọ bụla (dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ọbara mgbali elu).
9. Kedu otu ntụ ntụ Lorcaserin HCL dị irè?
Lorcaserin HCL, nke ejiri ihe oriri na mmega ahụ mee ihe, na-akpata nfe dị arọ banyere 12.9 lb (5.8 kg) na 5.6 lb (2.5 kg) site placebo.3 N'ihe dịkarịsịrị, banyere 47% nke ndị ọrịa ga-atụfu ma ọ dịkarịa ala 5% nke arọ ahụ ha (banyere 11.1 lb [5 kg]) jiri ya tụnyere 23% nke ndị ọrịa na-enweta placebo (ọnụ ọgụgụ dị mkpa iji na-emeso [NNT] = 4) .1-3 Banyere 22% nke ndị ọrịa ga-atụfu ma ọ dịkarịa ala 10% nke ahụ ha ihe dị njọ vs. 9% nke ndị ọrịa na-anata ebebo (NNT = 7). Ọnwụ ọnwụ a dịgidere, na nkezi, ruo afọ abụọ. Ọnwụ ụfụ na-eme n'isi ụtụtụ, ma ndị na-adịghị atụfu 5% nke arọ ahụ ha n'ime ọnwa atọ mbụ nwere ike ịme 5% ọnwụ site na 52 izu. Ọnwụ ọnwụ na-erukwa na ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga 2 nke na-adịghị aṅụ insulin, ọ bụ ezie na ọ bụghị otu ihe ahụ .4 Ịkwụsị lovcaserin HCL mgbe otu afọ ga - eweta uru dị arọ nke dị n'ime 2.2 lb (1 kg) nke ntọala.1- 3 Enweghị nchọpụta banyere mmetụta nke ịkpọtụrụ HCL banyere ọnwụ, ọnya ọrịa shuga, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-agwọ ọrịa.
Ihe omumu na-egosi, ihe dị ka ọkara nke ndị na-anwụ anwụ na-ewere HCL maka otu afọ na ọmụmụ ihe ahụ furu efu ma ọ dịkarịa ala 5% nke arọ ahụ ha, ma e jiri ya tụnyere 20% nke ndị na-anwụ anwụ bụ ndị na-ebute pune placebo. Ihe dịka mmadụ ise n'ime ndị ọrụ HCL na-atụ egwu furu efu 10% ma ọ bụ karịa nke ahụ ha, ma e jiri ya tụnyere otu n'ime ndị na-etinye ọnọdụ site na 14. Ndị nọgidere na-aṅụ ọgwụ maka afọ abụọ enwere ike ịnọgide na-enwe mmetụta dị njọ karịa ndị gbanwere na placebo mgbe otu afọ gasịrị, onye nnyocha bụ Steven R. Smith, MD, nke ụlọ ọgwụ Florida na ụlọ ọrụ Sanford-Burnham na-agwa WebMD.
10. Lorcaserin HCL ntụ ntụ
Lorcaserin HCL ntụ bụ ọgwụ ọgwụ edere iji nyere ndị toro eto aka ma ọ bụ ndị buru oke ibu ma nwee nsogbu ahụike metụtara ahụike ka ha ghara ibu ibu ma ghara ịghaghachi azụ ahụ. Lorcaserin HCL powder a ga-eji na a belatara kalori nri na ihe omumu plan.Where ịzụta elu-adị ọcha Lorcaserin HCL powder Abụba ọnwụ Lorcaserin HCL ntụ ntụ bụ na a na klas nke ọgwụ na-akpọ serotonin ihe nnabata agonists. Ọkụ Lorcaserin HCL na-arụ ọrụ site na-enwewanye mmetụta nke zuru ezu ka e wee ghara iri nri.
Nri a na - abata na mbadamba ụrọ ma na - ewere 1-2 ugboro ugboro n'ụbọchị, na - enweghị ma ọ bụ na - enweghị nri .Ndị mmetụta dị ọkụ nke ọkụ ntụ nke Lorcaserin HCL gụnyere isi ọwụwa, ọgbụgbọ, na mgbu azụ. Mkpụrụ mmanụ Lorcaserin HCL nwere ike ime ka shuga ọbara dị ala (hypoglycemia) na ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga.Lorcaserin HCL ntụpụ nwere ike ime ka echiche gị ghara ime ka ị ghara ịdị nkọ. Ekwula ụgbọ ala ma ọ bụ rụọ ọrụ dị arọ ruo mgbe ị maara otú Lorcaserin HCL si emetụta gị.
11. Lorcaserin HCL ntụ ntụ Ịdọ aka ná ntị
A ghaghị iji ọgwụ a mee ihe na nri na mmega ahụ. Akwụsịla ịṅụ nkwonkwo Lorcaserin HCL n'ebughị ụzọ gwa dọkịta gị okwu. Tupu ị na-ebu ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL, ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnwe ma ọ bụ mgbe ọ bụla ị nwere:
• Nsogbu ọbara dịka sickle cell anemia, otutu myeloma, ma ọ bụ ọrịa leukemia
• Nrụrụ ahụ nke anụ ahụ, dị ka ọrịa Peyronie
• Ọrịa shuga
• Ọkụ obi
• Mgbochi ma ọ bụ nke oge ụfọdụ
• Nsogbu obi ndị ọzọ
• Ọrịa ime mmụọ
• Akụrụ ọrịa
Ị ga-agwa dọkịta gị na ị na-ebu ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL tupu ị nwee ụdị ịwa ahụ, gụnyere usoro ahụike. Ị gaghị eji ọgwụ ọ bụla ọgwụ ma ọ bụ ihe karịrị ọkpụkpụ (OTC) na-emefu mgbe ị na-eji okpukpu larịị Lorcaserin HCL enweghị mbụ agwa dọkịta gị okwu.
Gwa dọkịta gị banyere ọgwụ niile ị na-ebu tupu ịmalite ịkwa ntụ na Lorcaserin HCL, karịsịa ọgwụ ọjọọ iji mesoo ịda mbà n'obi, mpụga, nsogbu uche, ma ọ bụ oyi nkịtị. Ndị ọgwụ ndị a nwere ike ime ka nsogbu ndị dị egwu ma ọ bụ na-egbu ndụ mgbe ejikọtara ya na ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL. Ọ bụrụ na ị na - arịa ọrịa shuga, chọpụta ọbara shuga gị mgbe ị na - akpọ Lorcaserin, HCL ntụ ntụ. Dọkịta gị nwere ike ọ dị mkpa ka ị gbanwee ọgwụ ụfọdụ nke ọgwụ gị ma ọ bụrụ na ị mepee ọbara shuga dị ala. Mkpụrụ ntụ nke Lorcaserin HCL agaghị aba uru maka gị. Ọ bụrụ na ị gaghị efu ma ọ dịkarịa ala 2 pasent nke mbido ịmalite n'oge mbụ 5 izu nke ọgwụgwọ, dọkịta gị nwere ike ịgwa gị ka ị kwụsịrị ịṅụ ntụ ntụ Lorcaserin HCL.
I kwesiri idebe ndi ozo na dọkịta gi na laabu mgbe ị na-eji ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL. Onye dibịa gi nwere ike ichota ule ufodu iji lelee nzaghachi nke aru gi na ogwu.
12. Ọ bụ Lorcaserin HCL na-ekpofu ntụcha?
Mgbe a bịara ịnakwere ọgwụ ọhụrụ, ihe nchekwa ahụ bụ nke mbụ ị ga-atụle ma ọ bụkarị otu ihe kpatara ịgbanye ọgwụ ọhụrụ. Mkpụrụ nkwonkwo Lorcaserin HCL bụ otu n'ime ọgwụ nrịanwụ kachasị dị arọ nke Food and Drug Administration (FDA) kwadoro. Ma, ọ pụtara n'ezie na ọ bụ 100% nchekwa?
Ọgwụ ọjọọ ọ bụla nwere ike ịkpata mmetụta ndị ọzọ na mmeghachi omume ọjọọ. Ahụ gị dị iche iche ma nwee ike imeghachi omume na ọgwụ ahụ, ebe onye ọzọ adịghị, maọbụ ọ bụrụ na ọ dị, mgbe ahụ, na mpempe akwụkwọ. A pụrụ ịkọ ụfọdụ n'ime mmeghachi omume ndị a, karịsịa maka ikpe mgbe ndị ọrịa nwere ọnọdụ ahụike ụfọdụ, dịka ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa shuga. Ndị ọzọ nwere ike ịdị iche site na ikpe ruo mgbe ikpe. Ọkụ na-eme ka Lorcaserin HCL nwere mmetụta ndị dị na ya, Otú ọ dị, ma ị ga-enweta ha ma ọ bụ na ọ gaghị adabere n'ọtụtụ ihe. Ha na-agụnye afọ (ndị okenye na-enwe mmetụta ndị ọzọ, karịa ndị na-eto eto), ole ị dị arọ, ma ị bụ nwanyị ma ọ bụ nwoke, na nsogbu ahụike ndị ọzọ (ụdị ọrịa shuga 2, ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu), elu LDL cholesterol, na ndị ọzọ).
Ụfọdụ n'ime mmetụta mmetụta ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL dị ọkụ ma were ya dị ka obere, na nke ahụ, uru nke ịṅụ oké nfe nke nkwupụta ụbụrụ Vancaserin HCL na-adị mfe karịa mmeghachi omume dịtụ ala. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ịnakwere mmetụta ndị ọzọ (ihe ndị ka njọ) nwere ike ịdị oke egwu maka ahụ ike gị, yabụ ọ bụrụ na ị nweta ha, ị ga-akpọtụrụ dọkịta ozugbo ma ọ bụ gaa na ụlọ mberede kacha nso.
13. Lorcaserin HCL ntụ ntụ Akụkụ Mmetụta na Mmetụta
Dị ka FDA si kwuo, mmetụta ndị nkịtị na-eme ka ọkụkọ Lorcaserin HCL na-agụnye isi ọwụwa, nhụjuanya, ike ọgwụgwụ, ọgbụgbọ, ọnụ ọkụ, na afọ ntachi. N'ime ndị ọrịa na-arịa ọrịa shuga, mmetụta ndị dị na ya bụ ọbara shuga dị oke (hypoglycemia), isi ọwụwa, azụ mgbu, ụkwara, na ike ọgwụgwụ. National Institutes of Health na-enye ndepụta zuru oke nke mmetụta ndị ị ga-enyocha ma tụlee dọkịta gị tupu ịre ọgwụ ahụ. A naghị anabata ọgwụ ahụ maka ndị ọrịa nwere ahụmahụ na ngwakọ Lorcaserin HCL ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị ahụ n'oge gara aga.
Ná mmalite oge nke ule, ndị na-eme nchọpụta nwere nchegbu maka nsogbu gbasara ọrịa obi na ndị ọrịa na-ewere ntụ ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL. Ma, FDA ka kwubiri na ọ bụrụ na ọgwụ ahụ emee ka ọ ghara ịkpata nsogbu nke nsogbu obi na-akpata na mmalite ọmụmụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ndị ọrịa na-arịa ọrịa obi valvular dị oké njọ ka FDA na-atụ aro ka ndị ọrịa nwere nkụda mmụọ congestive ghara ịkpachara anya mgbe ha na-aṅụ ọgwụ ahụ.
Na mgbakwunye, dị ka akwụkwọ akụkọ New England Journal of Medicine nwere nchegbu na ọgwụ ahụ nwere ike ibute nsogbu nke nsogbu uche ma ọ bụ nke uche, karịsịa maka ndị na-ewere ọgwụ ụfọdụ. Dị ka FDA si kwuo, ndị ọrụ nke ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL nwere ike ịnata gụnyere ọrịa serotonin, karịsịa mgbe a na-eji ya na ọgwụ ndị na-eme ka ogo serotonin ma ọ bụ na-eme ka ndị na-anabata serotonin rụọ ọrụ. Ndị a na-agụnye ọgwụ ndị a na-eji na-emeso ịda mbà n'obi na isi ọwụwa migraine. Lorcaserin HCL ntụ ntụ nwere ike ime ka ọgba aghara ma ọ bụ ebe nchekwa.
14. Akwukwo Lorcaserin HCL (Belviq) 'High' na Abuse
Ngwurugwu a nwere ike ịmalite ịkpa àgwà ma nwee ike ịdakwasị ụbụrụ nke ọrịa uche. Ihe ngwọta nke ntụ ntụ ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL nwere ike ịmepụta hallucination ma ọ bụ mmetụta dị elu. Enwetụla ọgwụ ma ọ bụ buru ya ọtụtụ ugboro karịa dọkịta gị na-edepụta .Lorcaserin HCL ntụ ntụ ntụ bụ ihe na-achịkwa ụbụrụ n'ihi na ọ nwere ike ibute mmebi ma ọ bụ ịdabere na ọgwụ. Na 2013, Nchịkwa Ndị Na-ahụ Maka Mgbochi Ọgwụ (DEA) ka a na-eji ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL mee ihe dị ka ọgwụ nke oge IV nke dị n'okpuru Mkpụrụ Controlled Act.Ịnweghị mgbe ị ga-ekere òkè ọgwụ a na onye ọzọ.
15. Ime na Lorcaserin HCL ntụ ntụ (Belviq)
Lorcaserin HCL ntụ ntụ nwere ike imerụ nwa e bu n'afọ. Gwa onye dọkịta gị ozugbo ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ buru atụmatụ ịtụrụ ime mgbe ị na-ewere ọgwụ a. Ọnwụ dị arọ n'ime ime nwere ike imebi nwa ebu n'afọ, ọ bụrụgodị na ibu oke. A maghị ma ọgwụ ọ na-abanye n'ime mmiri ara ara ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ike imerụ nwa na-enye ara ara.
16. Lorcaserin HCL ntụpọ Mmekọrịta
Gwa onye dọkịta gị banyere ọgwụ niile ị na-ewere, gụnyere ọgwụ ọgwụ na ọgwụ ndị na-abụghị ọgwụ, vitamin, na ihe mgbakwunye ọgwụ. Gwa dọkịta gị nke ọma ma ọ bụrụ na iwere:
• ndị na-agbapụta ụkwụ, ndị a na-eji agwọ ọrịa, dị ka sumatriptan (Imitrex, Treximet), eletriptan (Relpax), almotriptan (Axert), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), zolmitriptan (Zomig)
• monoamine oxidase inhibitors dịka isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), tranylcypromine (Parnate), selegiline (Emsam, Eldepryl, Zelapar), ụkọgiline (Azilect)
• ndị na-agwọ ọrịa tricyclic dị ka trimipramine (Surmontil), amitriptyline (Elavil), nortriptyline (Pamelor, Aventyl), protriptyline (Vivactil), na clomipramine (Anafranil)
• ndị na-eme ihe nkedo serotonin (SSRIs) dịka escitalopram (Lexapro), sertraline (Zoloft), citalopram (Celexa), paroxetine (Paxil), fluoxetine (Prozac, Sarafem) na fluvoxamine (Luvox)
• ndị na-eme ihe nchịkwa nke serotonin-norepinephrine (SNRIs) dị ka venlafaxine (Effexor), duloxetine (Cymbalta), na Pristiq (desvenlafaxine)
• ịme ihe (Wellbutrin)
• ọgwụ eji agwọ ọrịa na erectile
Nke a abughi ndepụta zuru oke nke mmekorita ogwu uzo nkwonkwo nke Capcaserin HCL. Jụọ onye dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ maka ozi ndị ọzọ.
17. Lorcaserin HCL ntụ ntụ nri mmekọrịta
Ọgwụ nwere ike iji ụfọdụ ihe oriri. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ ma dọkịta gị nwere ike ịdụ gị aka ka ị zere ụfọdụ ihe oriri. N'ihe banyere HCL okwu, ọ dịghị ihe oriri a kapịrị ọnụ ị ga-ewepụ na nri gị mgbe ị na-enweta ọgwụ a.
Akpa mmetụta nke Lorcaserin HCL ntụ ntụ na-akọ na Lorcaserin HCL ntụ ntụ gụnyere ndị na-esonụ:
A: Ọrịa Serotonin ma ọ bụ Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) dị ka mmeghachi omume. Gwa onye nyere gị ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ ma ọ bụ ihe niile na-esonụ:
• mgbanwe uche dịka nhụsianya, mmebi ahụ, mgbagwoju anya, ma ọ bụ mgbanwe ndị ọzọ na ọnọdụ uche
• nsogbu nchịkọta, nkwụsị akwara a na-achịkwaghị achịkwa, ma ọ bụ mgbaji ahụ ike (ihe ntụgharị uche)
• ịsọ ọsọ ma ọ bụ obi ọkụ ọkụ, ọbara mgbali elu ma ọ bụ dị ala
• ịcha elu ma ọ bụ ọkụ
• ọgbụgbọ, vomiting, ma ọ bụ afọ ọsịsa
• ike ịkpụ ahụ (akwara siri ike)
B: Ọrịa Heart Valvular. Ụfọdụ ndị na-aṅụ ọgwụ dịka ntụ ntụ Lorcaserin HCL nwere nsogbu na valvụ dị n'obi ha. Gwa onye nyere gị ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ ma ọ bụ ihe niile na-esonụ:
• nsogbu na-eku ume
• nwuo ogwe aka, ụkwụ, nkwonkwo, ma ọ bụ ụkwụ
• oke aghara, ike ọgwụgwụ, ma ọ bụ adịghị ike nke na-agaghị apụ
• ngwa ngwa ma ọ bụ na-akụkwa obi
C: Mgbanwe na anya gị ma ọ bụ ebe nchekwa.
D: Nsogbu uche. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ:
• ime ụlọ
• na-enwe mmetụta dị elu ma ọ bụ na-enwe ezigbo ọnọdụ (euphoria)
• mmetụta nke iguzo n'akụkụ gị ma ọ bụ nke ahụ gị
E: Mmetụta ma ọ bụ echiche nke igbu onwe gị. Lezienụ anya mgbanwe ọ bụla, karịsịa mgbanwe mberede, na ọnọdụ, àgwà, echiche, ma ọ bụ mmetụta gị. Kpọọ onye na-ahụ maka nlekọta ahụ ike ozugbo ma ọ bụrụ na ịnwe mgbanwe mgbanwe uche nke dị ọhụrụ, njọ, ma ọ bụ na-echegbu onwe gị.
F: Ọbara shuga (hypoglycemia) na ndị nwere ụdị ọrịa shuga 2 nke na-aṅụ ọgwụ, dị ka insulin ma ọ bụ sulfonylureas, na-eji agwọ ọrịa 2 ọrịa shuga. Nyochaa shuga ọbara gị tupu ịmalite ịmalite nkwonkwo Lorcaserin HCL na n'oge ọgwụgwọ gị na ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL.
H: Emere ihe ojoo (priapism). Nnukwu ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL nwere ike ịkpata mmekpa ahụ na-egbu mgbu nke kachasị karịa 6 awa. Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ nrụpụta na-adịgide adịgide karịa 4 awa ma ọ na-egbu mgbu ma ọ bụ na ọ bụghị, kwụsị iji ntụ ntụ Lorcaserin HCL kpọọ dọkịta gị ma ọ bụ gaa na nso nso ụlọ mberede ahụ ozugbo.
I: Na-egbusi obi ike. Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere akụkọ ihe mere eme nke obi gị na-eti mkpesa ngwa ngwa ma ọ bụ obi.
Mbelata na ọnụ ọgụgụ ọbara. Nnukwu ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ ọbara gị na-acha uhie uhie na ọbara ọcha belata. Dọkịta gị nwere ike ịnwale ule iji lelee ọbara gị mgbe ị na-eji ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL.
J: Mee ka prolactin mụbaa. Gwa onye dọkịta gị ma ọ bụrụ na ara gị amalite ịme mmiri ara ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ara gị na-amalite ịba ụba.
Nnukwu ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL nwere ike ime ka echiche gị ghara ime ka ị ghara ịdị na-eche. Ekwula ụgbọ ala ma ọ bụ rụọ ọrụ dị arọ ruo mgbe ị maara otú Lorcaserin HCL si emetụta gị.
Ejulala HCL ma ọ bụrụ na ị:
• enwere nfụkasị HCL ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ na-eme
• dị ime ma ọ bụ ime atụmatụ ịtụrụ ime
19. Gịnị mere o ji dị ogologo oge iji nweta ọgwụ ọjọọ ọhụụ ọhụrụ?
A na-enwe nsogbu nchebe banyere akụkọ nri nke nri nri. Ebe ọ bụ na 1999, mgbe e nyere ọgwụ na-acha ọbara ndụ, Xenical (orlistat), ọkụ ọkụ, otu ọgwụ ọjọọ, Meridia (sibutramine) wepụrụ na ahịa mgbe ndị ọrụ malitere igosi nsogbu nke nsogbu obi, na mmadụ abụọ , Belviq na Qnexa, ndị FDA jụrụ maka nsogbu nchekwa. Idozi uzo nke aru-ichikota uzo nwere ike inwe ihe ndi na-eme ogologo oge na obi na usoro ndi ozo di na ya, ya mere ndi mmepe ogwu nwere nnukwu osisi iji kpochapu ha iji gosi na ogidi ha nwere nchekwa.
(1) Zụrụ Lorcaserin HCL ntụ ntụ maka ọnwụ
Ịzụta ihe ndị na-eme ka akụ na ụba nke Capcaserin HCL tinye ma na-etinye ya na njedebe ọnwụ gị dị mma bụ naanị maka ndị mmadụ buru ibu, ya bụ, ndị mmadụ na-ahụkarị 30 (BMI) na ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị dọkịta na-enye ọgwụ ndị na-egbu egbu nke Lorcaserin HCL, na BMI na-amalite na 27 na elu, ma ọ bụrụ na ha nwere ụfọdụ ahụike ahụike metụtara (dika ọrịa shuga ma ọ bụ ọbara mgbali elu).
Na 2013 ọgwụ nri ọhụrụ maka ihe na-abaghị uru, ntụpu nkwonkwo nri na ọgwụ nke Lorcaserin HCL, kwadoro na Food and Drug Administration (FDA), mgbe afọ 13 ghara ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Mkpụrụ nkwonkwo Lorcaserin HCL, yana nri nri obere na kaịlị na mmega ahụ mgbe nile, nwere ike inyere aka nweta ihe na-enweghị atụ na njedebe ọnwụ na ahụike.
Mkpụrụ ọgwụ ọjọọ nke na-egbu egbu nke Lorcaserin HCL dabeere na akụrụngwa ọrụ a na-akpọ Lorcaserin hydrochloride powder ma kee ya na kesaa ndị Arena Pharmaceuticals. A na-akpọ ntụ ntụ Lorcaserin HCL maka ụdị ọgwụ ọjọọ serotonergic. Mkpụrụ ọgwụ serotonergic na-arụ ọrụ site n'ịchịkwa ogo nke serotonin (chemical dị na ahụ) n'ime ụbụrụ, ebe ọ na-arụ ọrụ nke neurotransmitter. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ maka ụra, agụụ, ọnọdụ, mmekọahụ, na iwe.
O nwere ike ịbụ na ị nụla na a na-eji usoro a serotonin mee ihe iji zere ịda mbà n'obi. Otú ọ dị, ntụ ntụ Lorcaserin HCL dị iche na mgbochi ndị dịka SSRI, n'ihi na a na-eche ya kpọmkwem maka agụụ. Ọ na - eme ka ndị na - anabata mkpụrụ ndụ ntanetị dị na serotonin na ebe hypothalamic, bụ ndị na - ahụ maka inwe mmetụta zuru ezu. Nke ahụ pụtara na agụụ na-ebelata, ndị mmadụ na-enweta obere agụụ na-agụ nri, na-agbanye ngwa ngwa ma nọgide na-adị ogologo. Nke a na-anọchite anya enyemaka dị egwu maka ndị na-agba mbọ ịlafu ibu.
(2) Ụgwọ nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL
Ọkụ dị na Lorcaserin HCL dị n'elu ụlọnga na ụlọ ọgwụ ndị dị gburugburu USA ebe ọ bụ na May 2013, mgbe nkwenye nke Frans de Lorcaserin HCL. Enwere ike ịchọta mkpuchi mkpuchi mkpuchi nke Lorcaserin HCL site na mkpuchi mkpuchi gị (mgbe ụfọdụ ọbụna ọnụahịa zuru ezu). Ma nke ahụ dabere n'ụdị mkpuchi ahụ na ọtụtụ ndị ọrịa ga-eji ego nke ha zụrụ Lorcaserin HCL powder.
Ọnụahịa nke ọgwụ ahụ na-adabere na ọnụahịa nke ọganihu, nke bụ, n'ezie, ihe nzuzo nzuzo. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na mmepe nke ugbo Lorcaserin HCL na-efu ụlọ ọrụ ahụ karịa 1.5 nde dollar US. E nwere ihe ndị ọzọ na-emetụta ọnụahịa nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL, dịka ịme ihe nlekọta oge na nsogbu ahụ, mmepe nke usoro ahụ pụrụ iche dabere na ihe mgbochi na-arụsi ọrụ ike (ngwọta ọkụ nke Lorcaserin HCL), ndebanye aha ọgwụ ahụ, nkwalite na n'ikpeazụ, ụgwọ nke nchọpụta na-aga n'ihu n'ihu banyere ọgwụ. N'ime ihe ndị a, nhazi nke nchọpụta ahụ na ọnwụnwa ahụike kachasị ọnụ, dịka ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ ndị na-eme nnyocha ahụ ụgwọ, yana ndị ọrịa.
Ya mere, na-atụle na nchọpụta na ọmụmụ na ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL nọ na-aga n'ihu 10 afọ ugbu a (ma ka nọ na-arụ ọrụ), ọ bụghị ihe ijuanya na ọnụahịa nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL dị elu, karịsịa tụnyere ibu ọzọ ọgwụ nyocha nke dị na mbụ.
Otú ọ dị, ihe ndị na-emetụta ego nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL, dị elu karịa, bụ ndị a na-emebu mgbe a na-atụle ya mgbe ị na-akwụ ụgwọ ọgwụ. N'ikwu eziokwu, a na-echebara ọtụtụ n'ime ha echiche, mgbe a na-akwụ ụgwọ nkwonkwo Lorcaserin HCL. Ma n'ihi na Arena Pharmaceuticals anaghị ekwupụta ozi banyere akọpụta ntụ ntụ nke nkwupụta akụ nke Lorcaserin, ọ gaghị ekwe omume ịnye ndepụta ziri ezi nke ihe ndị na-ekpebi ego ya. Ya mere, nyocha a nyere elu bụ naanị otu ihe, ọkachamara ọkachamara kwadoro ya.
Ọ dịkwa mma iche na ọ gwụla ma ndị Arena Pharmaceuticals na-ere ikike ikike nke Lorcaserin HCL na-emepụta ụlọ nrụpụta ọzọ, maọbụ ruo mgbe ọgwụ ndị na-emepụta ihe na-adabere na ngwongwo Lorcaserin HCL na-apụta n'ahịa (nke ọ ga-abụ na ọ gaghị eme na 10 afọ na-esonụ ), ego ntụ ọka Lorcaserin HCL agaghị agbanwe agbanwe. Ya mere, ọbụlagodi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-emepụta nsụgharị dị ọnụ ala nke ntụ ntụ nke Lorcaserin HCL, na-eke ụfọdụ ụdị asọmpi n'etiti ụdị ahụ, ọnụahịa nke ihe ọkụkụ mbụ nke Lorcaserin HCL ga-adị otu. N'ụzọ dị mwute, nke a pụtara na ndị ọrịa agaghị enwe ike ịṅụ ọgwụ na ọnụ ala dị nso n'ọdịnihu. Otú ọ dị, n'ọnọdụ a, ụgwọ bụ 100% ziri ezi site na mma, nrụpụta ọrụ na nchekwa nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL.
Dị ka ọ dị ugbu a, ọnụahịa nke ntụ ntụ Lorcaserin HCL maka mbadamba Mbadamba 10 dị gburugburu 3.50 US dollar. Ebe ọ bụ na ndị ọkachamara na-ede ọgwụ na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe ugboro abụọ kwa ụbọchị, mkpụrụ ego 60 kwa ọnwa ga-efu na dollar 210 US. Ọkụ dị na Lorcaserin HCL dịkwa na mpụga US, na Europe, Canada, na Mexico. Mana, aha aha nwere ike iche, dabere na mba ahụ. Jụọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ọgwụ ị bu n'obi ịzụta bụ otu ihe ahụ Lorkerin HCL, dị n'okpuru aha ọzọ.
(3) Otu esi eme ịzụta Lorcaserin HCL ntụ ntụ?
I nwekwara ike ịzụta uzuzu Lorcaserin HCL n'igwe, Otú ọ dị, jide n'aka na ịzụrụ ahụ sitere na isi iyi a pụrụ ịdabere na ya nakwa na ndị na-azụta snoozia na-emepụta akụ na Lorcaserin HCL. Ụdị nsụgharị ndị a na-akwadoghị nke ọgwụ a dị oke egwu ma nwee ike dị oke egwu maka ahụ ike gị. I nwekwara ike ịjụ dọkịta gị ma ọ bụ onye ahụike ahụ ka ọ gwa gị ka ị bụrụ ebe a pụrụ ịdabere na ya, ka i wee nwee ike ịzụta uzuzu Lorcaserin HCL ugbu a.
Nke a bụ nkwenye a pụrụ ịdabere na ya-AASraw, nke bụ isi na - enye ntụpọ ntụ ntụ .ASaraw na - enye ezigbo ntụpọ na nkwonkwo nkwonkwo Lorcaserin HCL na ịdị ọcha abụghị ihe na - erughị 98% .Ọdịmma uru sitere na AASraw dị ka agbaso:
Tags: ịzụta Lorcaserin HCL ntụ ntụ, Lorcaserin HCL ntụ ntụ, Ndị na-ere ngwaahịa na-emepụta ihe ọkụkụ na-emepụta akụ na mpaghara Lorcaserin, Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ
Enwere m ike ịchekwa ntụ ntụ a na ogo 37 dịka m ga-arụ ọrụ na india na m ga-akwadebe usoro a n'ime ọrụ nyocha m.
n'ihi na a na-akpọ ọnọdụ nchekwa dịka -2 degees
Nandrolone Decanoate ntụ ntụ na Nandrolone phenylpropionate powde Dobutramine Ntụ ntụ ntụ ntụziaka